🥇 VPN echekwara na ntụkwasị obi: VPN iri kacha elu nke 10
✅ VPN efu
🥇 VPN kacha mma
Gam akporo Okwey
VPN maka PC
Ọkụ nke Cyber ​​​​Ghost
Oge ọ bụla ha dị Ọtụtụ ndị ọrụ na-echegbu onwe ha maka nchekwa ha (ya mere nwere mmasị na VPN) n'ihi egwu cyber na-eto eto na ikpe nke oke nledo nke ghọrọ mkpuchi mgbasa ozi. Ọbụna karịa n'oge ọrịa na-efe efe, mgbe SARS-CoV-2 na-amanye ọtụtụ mmadụ ka ha na-emekọrịta ozi, nke pụtara ijikwa data ụlọ ọrụ dị nro ma ọ bụ nkeonwe sitere na netwọkụ ụlọ nke nwere ike ọ nweghị usoro nchebe azụmahịa.
VPN nwere ike ọ bụghị naanị inye gị nchekwa nchekwa maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ njikọ ụlọ gị, ọ nwekwara ike inyere gị aka n'ụzọ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịgbanwe isi mmalite IP gị dịka ịchọrọ, inwe ike ịhọrọ obodo amụrụ ị ga-enwe ike nweta ọrụ nwere oke ma ọ bụ amachibidoro maka obodo gị. Ihe na-adọtakwa ọtụtụ ndị ọrụ, ọkachasị ọrụ ọdịnaya nkwanye, gaa na VPN.
VPN iri kacha elu
N'etiti kacha mma ọrụ vpn Anyị na-akwado nke a Top10:
VPN adịchaghị ọnụ ala. Njirimara ya pụtara ìhè bụ:
AES-256 izo ya ezo
IP sitere na mba 59
6 ngwaọrụ n'out oge
Gosipụta maka nkwalite ya
Gaa na webụsaịtị ha
IP sitere na mba 90
7 ngwaọrụ n'out oge
Ọ pụtara maka nchekwa ya
IP sitere na mba 61
Na-apụta maka ọnụahịa ya
IP sitere na mba 94
5 ngwaọrụ n'out oge
Ọ pụtara maka ịdịmma ọrụ ya
IP sitere na mba 74
Ọ pụtara maka ịdịmma ya
IP sitere na mba 80
Achọpụtara maka ọsọ ya
IP sitere na mba 22
Ọ pụtara maka ọrụ teknụzụ ya
Zoo ịnyịnya ibu m!
IP sitere na mba 190
10 ngwaọrụ n'out oge
Ọ dị mma maka P2P na Torrent
IP sitere na mba 46
Kasị mma maka iji na Netflix
IP sitere na mba 56
Nhọrọ dị mma maka ezinụlọ
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara VPN
Tupu ị were VPN ikwesiri ima usoro nkọwa ka ị nwee ike ịhọrọ nke kachasị mma maka mkpa gị yana iji chọpụta ma ị chọrọ ọrụ VPN n'ezie ma ọ bụ na ọ bụghị.
una VPN (Personal Network Private), ma ọ bụ mebere netwọk nzuzo, bụ ọrụ na-enye gị ohere ijikọ na netwọk dị ka ịntanetị n'ụzọ echekwara. Iji mee nke a, a na-eji ihe nkpuchi nke mmalite nke netwọk okporo ụzọ, ọ na-enye IP dị iche na nke mbụ nke onye na-ahụ maka ịntanetị gị (ISP) nyere.
Ọzọkwa, VPN ga-emepụta "tunnel" njikọ na okporo ụzọ ezoro ezo, ya bụ, a ga-echebe okporo ụzọ data ọ bụla na-abata na nke na-apụ apụ site na algorithm nzuzo ka ndị ọzọ ghara igbochi ha na ederede doro anya site na mwakpo site na iji sniffers (network pack sniffers) dị ka MitM (Nwoke na Middle), na ọbụna ga-anọgide. zoro ezo site na ụfọdụ ọrụ na ndị na-enye ndị nwere ike ijide okporo ụzọ gị wee chekwaa ya.
Ihe niile dị n'elu nwere ụfọdụ "mmetụta ndị ọzọ". Dịka ọmụmaatụ, site n'ịgbanwe IP, ọ ga-enye gị ohere nweta ọdịnaya amachibidoro ma ọ bụ kpachie na mpaghara mpaghara gị. Dịka ọmụmaatụ, n'ezie ị nwara ikiri ọwa nkwanye sitere na obodo ọzọ ma ọ na-egosi gị ozi na-agwa gị na ọrụ a dị naanị maka ndị ọrụ si obodo ahụ. Ọ dị mma, enwere ike zere ụdị mmachi a site na iji VPN…
n'efu vs akwụ ụgwọ
E nwere ụfọdụ ọrụ VPN efu kpamkpam, na ndị ọzọ akwụ ụgwọ na-enye obere ọrụ efu. Mgbe ị tụlere iji VPN, ọ bụ n'ihi na ịchọrọ nchekwa kachasị ma ọ bụ nweta ụfọdụ ọrụ amachibidoro na mpaghara gị. Ma nke ahụ abụghị ihe ị ga-enyefe ọrụ n'efu.
Otu n'ime ihe kpatara ya bụ na ọrụ efu na-enwekarị nchebe dị ala mana, karịa ihe niile, n'ihi na ha nwere oke okporo ụzọ kwa ụbọchị, kwa izu ma ọ bụ kwa ọnwa. Nke a ga - egbochi gị inwe ike iji ndị na - akwụghị ụgwọ kpụ ọkụ n'ọnụ na nke ahụ agaghị ekwe omume maka mgbasa ozi vidiyo na-eri ọtụtụ data (karịsịa ma ọ bụrụ na ha bụ HD ma ọ bụ 4K). Na nke ka njọ, ọrụ VPN n'efu anaghị ekwe ka ị rụọ ọrụ na mgbasa ozi n'ọtụtụ ọnọdụ.
Ya mere, mgbe ịnweta otu n'ime ọrụ VPN efu ị ga-emesị nwee nkụda mmụọ na ejedebe na ọrụ akwụ ụgwọ site na ị nwetaghị ihe ị chọrọ n'ezie. Na mgbakwunye, ọrụ akwụ ụgwọ agaghị adị oke ọnụ, ebe dị anya site na ya, enwere onyinye dị ụtọ nke na maka euro ole na ole kwa ọnwa ga-enye gị ohere ịnweta ọrụ adịchaghị.
VPN kacha amasị anyị
Site3, € 10
Site2, € 75
Site1, € 79
Ma cheta ihe ha na-ekwu, mgbe ihe nwere onwe, ngwaahịa a bụ gị. Ya bụ, ụfọdụ ọrụ efu ga-enyocha ọrụ gị ma nwee ike iji ya ree ya ndị ọzọ, gosi mgbasa ozi dịka mmasị gị si dị, ma ọ bụ nweta ụdị nkwụghachi akụ na ụba maka ya. Ya mere, ha na-enye ọrụ efu, mana ha na-erite uru n'akụkụ nke ọzọ ...
Ọrụ ndị ọzọ nwere ike ọbụna ree bandwit nye ndị ahịa ndị ọzọ nke ọrụ ịkwụ ụgwọ gị. Ya bụ, ha na-eji akụkụ nke akụrụngwa gị bufee ya ndị ọrụ nwere akaụntụ adịchaghị.
Onye ọzọ VPN ma ọ bụ nke gị?
Ọ bụ eziokwu na ị ga-emeli ya mepụta VPN nke gị eji ihe nkesa nwere GNU/Linux na OpenVPN (ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ na ngwanrọ yiri ya). Mana ụdị VPN a ga-adị ntakịrị karịa n'ihe gbasara ọsọ site na bandwidth netwọk gị na ị ga-eme ike na nchịkwa n'onwe gị, nke ahụ gụnyekwara imeso nsogbu teknụzụ nwere ike ibili na sava ahụ.
Nke a abụghị nhọrọ maka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ, ọbụnadị maka ọtụtụ ndị ọrụ ọkachamara. Ya mere, kacha mma were ọrụ VPN ndị ọzọ were nweta nkasi obi ọ na-enye. N'okwu a, naanị ị ga-echegbu onwe gị maka ịwụnye onye ahịa wee malite ịnụ ụtọ ọrụ ahụ site na otu ụbọchị.
Ọ bụ ezigbo nhọrọ ịzụta VPN rawụta?
Ọ bụ ezie na e nwekwara ụfọdụ ndị na-anya ụgbọ ala, ma ọ bụ ndị na-anya ụgbọ mmiri, na ha na-enye VPN etinyelarị. Ha bụ ndị na-anya ụgbọ ala adịchaghị ọnụ na-erikarị ntakịrị karịa nkezi, mana ha na-enye ọtụtụ uru na-adọrọ mmasị na ọrụ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịhụ ụfọdụ ọmụmaatụ dịka:
Egwuregwu Linksys WRT32X
Ọ bụ ezie na ọ bụ nnukwu nhọrọ n'ọnọdụ ụfọdụ, Ị kwesịrị ịkpachara anya na ụfọdụ ụdị rawụta VPN dị ọnụ ala. Ụfọdụ n'ime ha na-egosi na ha nwere ụdị ọrụ a mana ọ na-ezo aka naanị onye ahịa, na ha enweghị ọrụ nke ihe nkesa na-enye. Ya mere, ị ga-ewekwa ọrụ ndị ọzọ ka ọ rụọ ọrụ.
Ka ị ghara inwe nsogbu ọ bụla, anyị achịkọtala ndị ọkwọ ụgbọ ala VPN kacha mma ị nwere ike ịnweta site na ịpị bọtịnụ na-esonụ:
Hụ VPN Routers
Lezienụ anya maka nke a! Ọtụtụ na-azụta otu n'ime ndị na-anya ụgbọ ala ma nwee obi iru ala, mana data ha ka na-echekwa ya.
Uru nke iji VPN
Dị ka ngwaahịa na ọrụ ọ bụla ọzọ, VPN nwere uru na ọghọm ya. Mana n'ezie, uru ndị ahụ dị ike karịa iji mee ka ị kwenye iwere ya n'ọrụ:
Izo ya ezo nke okporo ụzọ netwọk nke mere na agaghị ebufe data gị n'edemede dị larịị yana ịkwanyere nzuzo (ozi ebufera n'etiti onye na-ezipụ na nnata enweghị ike ịnweta ndị ọzọ na-enweghị ikike). Nke ahụ gụnyere okporo ụzọ niile n'ozuzu ya, ọ bụghịkwa mmasị na sava proxy nke ị nwere ike hazie maka ihe nchọgharị weebụ ma ọ bụ maka ụfọdụ ngwa. N'okwu a, a ga-echekwa okporo ụzọ niile sitere na ngwaọrụ gị.
Nzuzo ka ukwuu na amaghị aha. Ọ bụghị naanị maka izo ya ezo, kamakwa maka izobe mmalite nke IP.
Gafere mmachi nke mpaghara ala gị iji IP sitere na obodo ndị ọzọ nke ọrụ ahụ na-arụ ọrụ na-enweghị oke.
Onye na-eweta ịntanetị ma ọ bụ ISP (Telefónica, Orange, Eurona, Jazztel, Vodafone,…) agaghị enwe ike ịmata ojiji ị na-eji njikọ gị. Enweghị VPN ọ ga-enwe ike ịmata ibe ndị ị gara, ọ bụrụ na ibudata ọdịnaya pirated, wdg. Nke a bụ ebe ọ bụ na okporo ụzọ niile ga-agafe na sava ha na ndekọ ya ga-adịgide. Na mgbakwunye, iwu chọrọ ka ISP chekwaa data dị otú ahụ ruo ọtụtụ afọ. Enwere ike ree ma ọ bụ bufee data a niile na ụlọ ọrụ mgbasa ozi, ụlọ ọrụ gọọmentị, wdg.
data iguzosi ike n'ezi ihe, nke mere na mgbe ha rutere n'ebe ha na-aga, ha bụ otu ndị ahụ si ebe ahụ pụọ. Ya bụ, a naghị agbanwe ha n'ụzọ.
VPN dị nnọọ mfe, mgbe ụfọdụ ọ na-agụnye naanị ịpị bọtịnụ ka ịmalite ma ọ bụ kwụsị ya. Kama, ọrụ ndị ọzọ dị ka ihe nkesa proxy, yana usoro nchekwa ndị ọzọ dị iche iche, nwere ike ịpụta mgbagwoju anya.
Na-echekwa. N'agbanyeghị na ọ nwere ọnụ ahịa, ọ dị ala karịa nke ọrụ ndị ọzọ ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ ndị ọkachamara nchekwa nwere ike chekwaa netwọkụ ahụ.
Ọdịmma nke VPN
N'ezie VPN enweghị Ihe ojoo dị ịrịba ama. Naanị isi ihe abụọ nwere ike ime ka ọ pụta ìhè na-emegide ya:
Ahịa: Ọ bụ ezie na e nwere ndị nweere onwe ha, ekwuworị m na ha abụghị ndị kasị mma. Ya mere, iji nweta ezigbo VPN ị ga-akwụ ụgwọ. Otú ọ dị, ha abụghị ọnụ ahịa dị elu ma kwenye maka ọtụtụ ndị mmadụ. Site na router nwere VPN ị nwekwara ike zere ụgwọ ndị a…
Ọsọ njikọ: N'ụzọ doro anya, mgbe ị na-ezoro ezo data, ọ ga-abụrịrị ezoro ezo na decrypted ka i wee hụ ya dị ka a ga-asị na i nweghị VPN. Ya bụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ pụtara ìhè nye gị, mana nke ahụ na-eche na ibu mgbakwunye ga-ebelata ọsọ. Ọ bụrụ na ị nwere ADSL ngwa ngwa, eriri optic, ma ọ bụ 4G/5G, ọ gaghị abụ nnukwu nsogbu. Ọ nwere ike bụrụ naanị ihe na-emerụ ahụ maka njikọ dị nwayọ (ma ọ bụ mgbe ị nwere ụdị oke data ọ na-eme ka ị dalata maka ọnwa ndị ọzọ).
Kedu ihe kpatara m ji achọ VPN?
Ị ga-enyocha ma ọ bụrụ na ịnwe VPN nwere uche ọ bụla n'okwu gị. Na ụkpụrụ, maka nzuzo na ihe nchekwa naanị, ọ bara uru. N'ezie, nzuzo bụ ikike na netwọkụ nke nnukwu ụlọ ọrụ na-emebi kwa ụbọchị. Site na VPN ị nwere ike itinye ngwọta maka nke a. Ma n'agbanyeghị nke a, e nwekwara ndị ọzọ ihe mere ị ga-eji chọọ VPN:
SARS-CoV-2: Ọrịa ọjọọ a agbanweela ọha mmadụ ma gbanwee ụzọ e si eme ihe n'ọtụtụ ụzọ, nakwa n'ebe ọrụ. Ugbu a enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na ndị nweere onwe ha na-arụ ọrụ telefon. Nke a gụnyere iji ngwaọrụ nke gị jikọọ (lee BYOD) yana netwọk ụlọ gị. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ejikwa data ndị ahịa nwere mmetụta (data ụtụ isi, foto nzuzo, ozi echekwara site na ọgụgụ isi, data ahụike,…) na enweghị VPN, ndị ọzọ na-enyeghị ikike ga-enweta ha ma ọ bụ gbochie ha.
Chedo data nchọgharị gị: Site na VPN ị nwere nchebe ọzọ dịka m kwuru na isi ihe gara aga. Nke a dị oke mkpa mgbe ị na-eji njikọ WiFi ọha ma ọ bụ enweghị nchebe iji nweta ụfọdụ ọrụ ụlọ akụ, wdg, na-enweghị ndị ọzọ na-enwe ike igbochi okwuntughe na ụdị nzere ndị ọzọ ma ọ bụ data etinyere.
Gafere nyocha ịntanetị: Ọ bụrụ n'ịhụta ọrụ ma ọ bụ ngwa na-adịghị na mpaghara mpaghara gị, iji VPN ị nwere ike nweta ya site na ịnweta IP site na obodo ọzọ. Nke a nwere ike ịba uru nke ukwuu ikiri ụfọdụ ọwa ịntanetị, nweta ọdịnaya na-adịghị na ụfọdụ nyiwe nkwanye nkwanye ugwu (AppleTV, Netflix, Disney+, F1 TV Pro,...), na ọbụna maka ụfọdụ ngwa amachibidoro na Google Play, App Store, wdg wdg.
Nbudata P2P na Torrent: iji budata ọdịnaya site na netwọk Torrent ma ọ bụ P2P, n'etiti weebụsaịtị ndị ọzọ iji budata ọdịnaya pirated ma ọ bụ iwu na-akwadoghị, ị nwere ike ịtụkwasị VPN mee ya n'ụzọ na-enweghị aha yana na ISP enweghị ike ịma ọrụ a. Agbanyeghị na nke a bụ iwu na-akwadoghị ma ị ga-eme ya n'ihe egwu nke gị…
Dị ka ị na-ahụ, ngwa VPN na-aga gafere mfe nchekwa...
Kedu ihe m ga-amata ịhọrọ VPN kacha mma?
Enwere ụfọdụ teknụzụ nkọwa ị kwesịrị ị na-anya na karịsịa mgbe ị na-atụnyere ụfọdụ ọrụ VPN n'etiti nke ị nwere obi abụọ. Ha nwere ike ịbụ ezigbo ihe ngosi iji chọpụta ogo ọrụ ahụ yana ọ bụrụ na ọ dabara gị mkpa.
Ọnụọgụ nke sava na IP
Izo ya ezo
Ebe siri ike
NordVPN AES-256 Ngwa ngwa Site na mba 59 6 n'out oge Nkwalite
CyberGhost AES-256 Ngwa ngwa Site na mba 90 7 n'out oge Nche
Surfshark AES-256 Ngwa ngwa Site na mba 61 Unlimited Ahịa
ExpressVPN AES-256 Buena Site na mba 94 5 n'out oge Ogo ọrụ
ZenMate AES-256 Buena Site na mba 74 Unlimited
hotspot Shield AES-256 Ngwa ngwa Site na mba 80 Ngwaọrụ 5 Ọsọ
TunnelBear AES-256 Buena Site na mba 22 Ngwaọrụ 5 Ọrụ nka na ụzụ
Zoo ịnyịnya ibu m! AES-256 Ngwa ngwa Site na mba 190 10 n'out oge Ọ dị mma maka nbudata P2P na Torrent
ProtonVPN AES-256 Buena Site na mba 46 10 n'out oge Kasị mma maka iji na Netflix
PrivateVPN AES-256 Buena Site na mba 56 6 n'out oge Nhọrọ dị mma maka ezinụlọ
Ụfọdụ ọrụ VPN nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke sava gbasaa n'ọtụtụ mba, nke ga-abụ uru doro anya. Na mgbakwunye, ụfọdụ na-enye gị a IP dị iche iche random, mana ọrụ ndị ọzọ na-aga n'ihu ma hapụ gị ka ịhọrọ mmalite nke IP kwuru.
Nke a na-adọrọ mmasị nke ukwuu maka ọrụ ma ọ bụ ọdịnaya amachibidoro. Dịka ọmụmaatụ, were ya na ịchọrọ ịnweta ọrụ dị naanị na Sweden. Site na otu n'ime VPN ndị a ị nwere ike nweta IP Swedish wee nweta dị ka a ga - asị na ị bụ onye Swede ọzọ ...
Ihe algorithm zoro ezo
Ọ bụ otu n'ime data kachasị mkpa maka nchekwa si ọrụ. Ọ nwekwara ike imetụta arụmọrụ. N'ụzọ doro anya, ka ị na-enwekwu nchebe ka ị ga-atụfu ọsọ ọsọ, ọ bụ ezie na ụfọdụ ọrụ VPN ejirila teknụzụ ụfọdụ mee ka nke a ghara ịdị na ya, ha nwere ike ịnye ezigbo ọsọ na nchekwa.
Mgbe ọ bụla ịhọrọ VPN, ị ga-ahọrọ otu nwere algorithm nzuzo siri ike nke na-enweghị ihe ọghọm mara. Otu n'ime ndị ahụ Algọridim bụ AES-256nke bụ oke nhọrọ. N'ezie, ọtụtụ ọrụ ịkwụ ụgwọ na-ahọrọ maka nchebe ọkwa ọkwa agha, nke bụ otu n'ime ihe kachasị elu.
Na mgbakwunye na izo ya ezo, ụfọdụ ọrụ ịkwụ ụgwọ nwere teknụzụ nchebe agbakwunyere ma ọ bụ usoro maka ndị ahịa ha. Ma eleghị anya, zere algọridim na-enweghị nchebe dị ka SHA-1, MD4, na MD5 nke e mebiri.
Ma cheta, ọ nweghị usoro nchekwa 100%. Ihe kacha dị ize ndụ bụ ikwere na ị nweghị ike imerụ gị ahụ. N'ezie, ụfọdụ cybercriminals Ha enweela ike imebi njikọ ndị a site na iji ohere ụfọdụ nke adịghị ike ma ọ bụ ụzọ aghụghọ ndị ọzọ dị ka izu ohi isi.
Ọ bụ ihe ọzọ dị mkpa data ma ọ bụrụ na ịchọghị ka VPN daa mbà n'obi gị ngwa netwoso n'ụzọ dị ukwuu. Ya mere, ị ga-ahọrọ ọrụ na ezigbo ọsọ. Ọtụtụ n'ime ọrụ ndị dị ugbu a na-enye ọrụ na oke ọsọ dị elu, yabụ na ọ gaghị abụ nnukwu nsogbu, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-eji njikọ ngwa ngwa (ADSL, fiber optics, ...).
Nzuzo na amaghi aha
Anaghị m ezo aka na netwọk n'onwe ya, kama na data nke onye na-enye ọrụ VPN n'onwe ya nwere ike ịchekwa. Dịka m kwuru na mbụ, data agaghị agafe na sava ISP, mana ọ ga-agafe na nke Onye na-eweta VPN.
Ụfọdụ ndị na-eweta ya chekwaa data ndekọ dị ka aha gị, nkọwa ịkwụ ụgwọ, ezigbo IP gị, wdg. Data nke nwere ike inye aka mata gị. A na-atụ aro nke ahụ, yabụ ị ga-agụ akwụkwọ dị mma ma ndị na-eweta ndị a echekwara data a ma ọ bụ na ha echekwaghị. Kpachara anya maka ndị na-edebe ha ma na-ahọrọ mgbe niile ndị na-echekwa ihe ndekọ kacha nta.
Ụfọdụ ọrụ VPN efu enweghị ọrụ nka ma ọ bụ ndị ahịa ma ọ bụ ọ dara ogbenye. N'ihe banyere ọrụ ịkwụ ụgwọ, nke a na-adịkarị mma yana 24/7 (awa 24 na ụbọchị 7 n'izu), mana ọ bụghị otu ihe ahụ n'ọnọdụ niile.
Ụfọdụ ọrụ na-enye naanị nlebara anya na Bekee, ndị ọzọ ga-enwekwa ya na Spanish. Ha na-abụkarị site na ekwentị ma site na email, ụfọdụ na-enwekwa mkparịta ụka ndụ iji zaa ajụjụ gị ma ọ bụ dozie nsogbu ndị nwere ike ibilite.
Nkwado ma ọ bụ nyiwe
Ọrụ VPN efu nwere nkwado dị ntakịrị, mana ọtụtụ n'ime ndị a na-akwụ ụgwọ nwere nnukwu nkwado n'ihe gbasara nyiwe akwadoro. Ọrụ ndị a nwere mmemme ndị ahịa nwere ike ịwụnye na sistemụ arụmọrụ dị iche iche dịka Windows, macOS, Linux, Android, iOS, wdg. Ụfọdụ na-ekwe ka e mee ya na ụfọdụ smart TV yana na ihe nchọgharị site na mgbakwunye mgbakwunye.
Leba anya nke ọma ụdị sistemụ arụmọrụ ị na-eji n'ụlọ ma ọ bụ ọrụ ma họrọ onye na-eweta VPN mgbe niile nke nwere ike ịnye gị a kwadoro onye ahịa gọọmentị.
Enyi na enyi GUI
Ndị ahịa ahụ m na-ekwu maka ya na ngalaba gara aga nwere interface eserese nke nwere ike ịbụ karịa ma ọ bụ obere enyi na enyi. Ha na-adịkarị mfe ma ị chọghị nkà kọmputa ọ bụla iji gbanye ma gbanyụọ VPN ma ọ bụ mee ụfọdụ ntọala na ya.
Ọ na-adịkarị mfe dị ka ịgba ọsọ VPN ahịa na Pịa bọtịnụ nke mere na ọrụ ahụ na-arụ ọrụ wee malite ime "anwansi" ya.
Na ọrụ VPN akwụ ụgwọ ị nwere ike ịchọta ọtụtụ ụzọ iji kwụọ ụgwọ ndenye aha. Ụzọ ịkwụ ụgwọ ndị a nwere ike ịbụ ọtụtụ:
Kaadị akwụmụgwọ: Ọ dị mma na ọ dị adị maka ọtụtụ ndị ọrụ.
PayPal: ụfọdụ nyiwe na-anabatakwa ịkwụ ụgwọ site na ikpo okwu echekwara ebe naanị email gị chọrọ.
Ụlọ ahịa ngwa: Ụfọdụ VPN maka nyiwe mkpanaka na-enye ohere ịkwụ ụgwọ site na ọrụ ịkwụ ụgwọ nke ụlọ ahịa ngwa nke nyiwe mkpanaka, dị ka Google Play, App Store, wdg.
Ego: cryptocurrencies na-enye ohere ịkwụ ụgwọ enweghị aha, dị ka nke ejiri Bitcoin mee. Ọtụtụ ndị na-enye VPN na-akwado ụdị ịkwụ ụgwọ cryptocurrency a.
ndị ọzọ: Ụfọdụ na-akwado usoro ndị ọzọ dị iche iche.
Ma eleghị anya, okwu ahụ anaghị ada mgbịrịgba DMCA, mana ọ bụ okwu na-ezo aka na iwu nchedo nwebiisinka nke United States. Iwu a na-echebe ụdị ọdịnaya niile dị ka ihe nkiri, egwu, ngwanro, akwụkwọ, wdg megide mpụ.
Kedu ihe jikọrọ nke a na VPN? Ọ dị mfe, ụfọdụ ndị na-enye VPN nwere isi ụlọ ọrụ ha na mba ndị nwere iwu na-adịghị eche echiche ịza arịrịọ sitere na United States mgbe ụfọdụ arụrụ arụrụ arụ. Ya bụ, ha nọ ebe iwu kwadoro nke na-echebe ndị ahịa ha ma ọ bụrụ na achọrọ data ka e kpee ya ikpe.
Mana ọ bụghị ọrụ VPN niile na-arụ ọrụ site na ụdị paradaịs a na-abụghị iwu ndị a, ụfọdụ nọ n'ókèala ebe ha na-eme A ga-anabata arịrịọ ndị ahụ.. Ya mere ọ bụrụ na ị na-eji VPN gị maka mpụ, ị kwesịrị ịṅa ntị na nke a. Agbanyeghị, site na blọgụ a anyị anaghị akwado iji aghụghọ eme ihe…
1 VPN iri kacha elu
2.0.0.1 Gosipụta maka nkwalite ya
3.0.0.1 Ọ pụtara maka nchekwa ya
4.0.0.1 Na-apụta maka ọnụahịa ya
5.0.0.1 Ọ pụtara maka ịdịmma ọrụ ya
6.0.0.1 Ọ pụtara maka ịdịmma ya
7.0.0.1 Achọpụtara maka ọsọ ya
8.0.0.1 Ọ pụtara maka ọrụ teknụzụ ya
9 Zoo ịnyịnya ibu m!
9.0.0.1 Ọ dị mma maka P2P na Torrent
10.0.0.1 Kasị mma maka iji na Netflix
11.0.0.1 Nhọrọ dị mma maka ezinụlọ
12 Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara VPN
12.1 Gịnị bụ VPN?
12.2 n'efu vs akwụ ụgwọ
13 VPN kacha amasị anyị
13.1 Onye ọzọ VPN ma ọ bụ nke gị?
13.2 Ọ bụ ezigbo nhọrọ ịzụta VPN rawụta?
13.3 Uru nke iji VPN
13.4 Ọdịmma nke VPN
13.5 Kedu ihe kpatara m ji achọ VPN?
14.0.0.1 Gosipụta maka nkwalite ya
15 Kedu ihe m ga-amata ịhọrọ VPN kacha mma?
15.0.5 Hola Okwey
15.0.10 Radmin Okwey
15.0.12 Metụ VPN
15.1 Ọnụọgụ nke sava na IP
15.2 Ihe algorithm zoro ezo
15.4 Nzuzo na amaghi aha
15.5 nkwado ndị teknuzu
15.6 Nkwado ma ọ bụ nyiwe
15.7 Enyi na enyi GUI
15.8 Ụzọ ịkwụ ụgwọ
15.9 DMCA rịọrọ
Okwey maka gam akporo
VPN echekwara 2022 - Iwu nzuzo - Ozi gbasara kuki